‘Tiketi iko mba ụwa bụ ihe kacha mkpa,’ ka onye isi Super Falcons kwuru’. – Igbo Services
‘Tiketi iko mba ụwa bụ ihe kacha mkpa,’ ka onye isi Super Falcons kwuru’.
EgwuriegwuIsiokwu dị mkpaNaijiria
Onyeisi Super Falcons nke Naijiria, Onome Ebi, ekwupụtala na “Tiketi Iko Mbaụwa nke mba Afrịka nke ugboro itoolu bụ ihe kacha mkpa” ka otu ahụ gbadoro anya n’ebumnobi ejima nke iru eru maka asọmpi FIFA ụmụ nwanyị 2023, na ijide ụmụ nwanyị Afrika ha. Iko Mbaụwa (WAFCON) na Morocco n’ọnwa na-abịa.
Nigeria na mba iri na otu ndị ọzọ ga-asọ mpi WAFCON nke a na-achọsi ike na ala eze North Afrika n’etiti 2nd – 23rd Julaị, na ndị anọ niile gbara nke ikpeazụ bụ ndị edoro anya na ha ga-eso na asọmpi iko mba ụwa nke FIFA 2023 – nke kacha ukwuu n’akụkọ ihe mere eme nke egwuregwu ụmụ nwanyị nke a ga-eme na Australia na New Zealand.
“Anyị maara asọmpi siri ike nke a ga-eme na Morocco. Anyị enweghị echiche efu. Egwuregwu ụmụ nwanyị na-aga n’ihu na-eto eto n’ọtụtụ mba Africa ndị ọzọ, ngwa ngwa karịa onye ọ bụla nwere ike iche n’echiche, “Ebi kwuru.
kachaonye isi falconstiketi
Ụlọ ọrụ Naijiria nke ndị na-akwụ ụgwọ ego na-ekwe nkwa ọrụ emelitere.
Mmegbu ndị ọrụ ugbo: Ndị enyi Ala Afirika na-achọ enyemaka ECOWAS.
Ndị nnọchi anya ga-enyocha nchịkwa “Ecological Fund” site na 2010 ruo…